Waxaan kugu hambalyeynayaa iskaashigan. Gorgortan dheer iyo kormeer kadib, Shanghai Xieyanshi Abrasives ayaa ugu dambayntii maray COMAC'S (Shirkadda Diyaaradaha ee Ganacsiga ee Shiinaha) baadhitaan adag oo la hubiyo, noqo midkoodna lagu kalsoonaan karo ...
Hababka wax lagu shiido waxaa ka mid ah shiididda qallalan, biyo shiida, saliidda wax lagu shiido, wax shiidaya iyo daawada cadayga. Shiidi qallalan loo qaybin karaa shiidi qallafsan, shiidi flat iyo shiidi ganaax. Shiidi qallafsan guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in laga saaro dhogorta qoryaha, nabarrada, calaamadaha xabagta iyo p ...
Talaabooyinka Lagu Rakibo Qalabka Adeegga Habboon ee Xys Boorka Furimaha Dagaalka ee Qalalan ee Bilaashka ah
Tallaabada 1 Faahfaahinta qaybaha dayactirka: (Waxyar oo kala duwanaansho ah oo loogu talagalay ikhtiyaarrada qaybaha kala duwan) Tallaabada 2 ...
Maxay yihiin noocyada ugu waaweyn ee loo yaqaan 'abrasives'?
Abrasive Abrasives waa magaca guud ee xoqidda iyo xoqidda, oo ay ku jiraan alaabada wax lagu xoqo iyo alaabada Bai Abrasives. Abrasive Abrasives waxaa loo yaqaan ilkaha warshadaha. Marka la shiidayo, qalabka wax lagu xoqo ama la xoqo ayaa badanaa loo isticmaalaa sida qalabka wax lagu shiido qaybaha mashiinka si loola kulmo farsamo gaar ah ...